မြန်မာနိုင်ငံ မှာလည်း ဝေဘူဆရာတော်ဘု ရားကြီးလက်ထပ် က ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်…. – Shwewiki.com
ဒရက် ကူလာ ခေါ်သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်
၁၉၇၃ ခုနှစ် က ဆားဗီးယားနိုင်ငံ ယက်ဒွတ်စတားဒေသမှာ ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည် ….လူအများစုဟာ အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာ သွေးစုပ်ခံရသခဲ့သို့ ခံစားရပြီး ဘာဖြစ်မှန်းမသိပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ် ….အစိုးရက ဆရာဝန်များကို အဖွဲ့ ဖွဲ့ ပြီးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ပေးခဲ့တယ်….
အဲဒီဒေသက သချိ င်္ု င်းကုန်းက အုပ်ဂူ ၁၃ ခုကိုပြန်ဖေါ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ မြှုပ်ထားတဲ့သက်တမ်းအရဆိုလျှင် အရိုးများပင် ဆွေးနေသင့်သော်လည်း ဆွေးမနေပဲ အလောင်းများမှာ ပကတိအိပ်ပျော်နေသကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး ….
သွေးရောင်လွှမ်းနေတာကို အံ့သြဖွယ်တွေ့ ရှိရတယ် ….အဲဒီ အလောင်းကောင်များကိုမီးသင်္ကြုပြီးတဲ့ အချိန်မှစပြီး ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်…
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ထပ်က ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် ….ရွာတရွာမှာ ခလေးတွေဟာ ၇ ရက်တယောက် ၁၀ ရက်တရောက်နုန်းနဲ့ သေတာ တရွာလုံးခလေးတွေ ကုန်ခါနီးခဲ့တယ် ….
ဒါနဲ့ ရွာလူကြီးတွေက ဝေဘူဆရာတော်ကြီးကို ပင့်ပြီးအကျိုးအကြောင်းလျှောက်တော့ ဆရာတော်ကြီးက မိန့် တယ် မင်းတို့ တွေ ပထမဆုံးသေတဲ့ခလေးရဲ့ အလောင်းကို မြေမြှုပ်ထားတယ်မလားတဲ့ ….အဲဒီခလေးရဲ့အလောင်းကို ပြန်ဖေါ်ပြီး မီးသင်္ဂြိုဟ်လိုက်တဲ့ပြောခဲ့တယ်…
ရွာသားတွေလည်း ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ပထမဆုံးသေတဲ့ခလေးအလောင်းကို ပြန်ဖေါ်ကြတဲ့အခါ အလောင်းဟာ မြှုပ်နှံမှု့သက်တမ်းအရ ပုပ်ပွပြီးအရိုးကျနေရမှာကို ဘာမှမဖြစ်ပဲ အိပ်နေတဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်အတိုင်းပဲ ဖြစ်နေခဲ့တယ် ….
အဲဒီခလေးကို မီးသဂြိ င်္ုဟ်လိုက်တော့မှ အဲဒီရွာလည်း ခလေးတွေသေတာ ရပ်သွားခဲ့တယ်…အခုလည်း အင်္ဂလန် နိုင်ငံ တနိုင်ငံလုံး ဒရက်ကူလာ တစ်သောင်းခွဲဝန်းကျင်ခန့် ရှိတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာထားခဲ့တယ်….
တကယ်တော့ ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာ လူတွေ ကိုယ်ကျင့်တရားအားနည်းချိန်မှာ ဖြစ်တက်ပြီး ပရလောကသားများဟာ လူ့ လောကကို ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ကြခြင်းပါပဲ ….အထူးသဖြင့် ခုလိုအချိန်မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်….
ဗုဒ္ဓလက်ထပ်ကလည်း ဝေသာလီပြည်မှာ အဲလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေ ဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ဘုရားရှင် ကိုယ်တိုင် ကယ်ခဲ့ရဘူးတယ်….၁၉၆၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ကပ်ဆိုက်တော့လည်း လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ တနိုင်ငံလုံးကို ပတ်ပြီး ကယ်ခဲ့ရဘူးတယ်….
ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းကြတဲ့ အခုလိုခောတ်မှာ ပရလောကသားများရဲ့ နှောင့်ယှက်မှု့ကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ခံရတက်တဲ့အတွက် ခုချိန်မှာ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းဖို့ အရေးကြီးလှပါတယ်….